एक्सनले भरिएको प्रशान्त र शुशीलको ‘रणवीर’ ट्रेलर « Mazzako Online
एक्सनले भरिएको प्रशान्त र शुशीलको ‘रणवीर’ ट्रेलर
माघ १८ गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शन हुने फिल्म ‘रणवीर’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एक्सनले भरिएको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । प्रशान्त ताम्राकार र सुशील सिटौला बीचको एक्सनका दृष्यहरुलाई देख्न सकिन्छ ।
प्रशान्त र शुशील दुवै एंग्री अवतारमा प्रस्तुत छन् । नायिकाहरु शुभेच्छा खड्का र सुपुष्पा भट्टलाई फिल्ममा शुशीलको प्रेमिकाको रोलमा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्मको ‘तिरिमिरी तिरिमिरी तीन तारा’ ले मज्जाको प्रतिक्रिया पाइरहेको बेला सार्वजनिक ट्रेलर प्रमोसनको गतिलो हतियार बन्न पक्का छ ।
फिल्म ‘रणवीर’ मा कथा, पटकथा, संवाद निर्देशक गोविन्द सिंह भण्डारीको छ । फिल्ममा रवि गिरी, नरेश पौडेल, हरिहर शर्मा, टिका पहाडी, भोलाराज सापकोटालगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ । फिल्ममा महेश पौडेलको छायांकन, कृष्ण भण्डारीको सम्पादन र चन्द्र पन्तको द्वन्द्व छ । गोमा बिस्ट थापा र दिपेन्द्र रेग्मीले निर्माण गरेको फिल्ममा रामजी लामिछाने र सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी छ ।
भदौले धान्ला त यती धेरै फिल्म ?
असारमा किन डराउँछन् निर्माता ?
नीतालाई बिहेको रहर
‘प्रेम गीत ३’ हमालले छाडेसंगै शिव श्रेष्ठ फाइनल
प्रियंका र आयुष्मानलाई दर्शकले पत्याउन छाडेका हुन् ?